Maxaa sababay shaqo joojinta Zimbabwe? - BBC Somali
Maxaa sababay shaqo joojinta Zimbabwe?
13 Luulyo 2016
Image caption Lacagta Zimbabwe ayaa qiimo beeshay
Shacabka dalka Zimbabwe ayaa loogu baaqay in ay ku dhaqaaqaan labo maalmood oo shaqo joojin qaran ah, iyadoo arrintaa looga ashtakoonayo dowladda oo sida la sheegay dalka u maamuleysa si aan wagaansanayn.
Baaqan oo shacabka loogu soo bandhigay baraha bulshadu ku xiriirto ayaa ku soo beegmaya kaddib markii usbuucii la soo dhaafay shaqo joojin guud ay ka dhaqan gashay dalkaasi, arrintaasi oo sababtay in ay gebi ahaanba xirmaan iskuulada, ganacsiga iyo dukaammada dalkaasi.
Image caption Sahaqo joojintan ayaa midii u ballaarnayd mudo dheer
Shaqo joojintaasi ayaa ahayd tii ugu ballaarnayd tan iyo sanadkii 2005.
Dalka Zimbabwe ayaa waxa uu wajahayaa lacag la’aan ba’an, waxaana bishii la soo dhaafay xilli dambe mushaarkooda la siiyay dhammaan shaqaalihii dowladda.
Ciidamada milatariga iyo booliska ayaa musharaaadkooda la siiyay kaddib labo usbuuc oo uu dib u dhac ku yimid, haseyeeshee macalimiinta iyo kalkaaliyeyaasha caafimaad ayaa ka mid noqday shaqaalaha lacagahooda la siiyay usbuucii la soo dhaafay xilli dalka ay ka jirtay shaqo joojin ba’an.
Dhibaatada ugu weyn ayaa ah in mushaaraadka shaqaalaha ay khasab noqotay in lagu bixiyo lacago qalaad maadaama Zimbabwe ay qubtay lacagteedi sanadkii 2009-kii si ay u xakameyso sicirbararka.
Image caption Abaar ayaa xaaladda sii xumaysay
Dowladda wadaagga ah ee uu qaybta ka yahay mucaaradka oo xilka hayay laga soo billaabo sanadkii 2009 Ilaa 2013 ayaa ku guuleysatay in ay wax ka qabato dhaqaalaha dalkaasi ee sii burburaya.
Haseyeeshee dhibaatada ayaa dib u billaabatay kaddib markii xisbiga madaxweyne Mugabe ee Zanu-PF uu mar kale xukunka dalkaasi la wareegay sanadkii 2013, xilligaasi oo uu ballan qaaday in uu abuurayo shaqooyin hor leh.
Inta badan dadka dalkaasi ma awoodaan in ay helaan nolal maalmeedkooda, waxaana xaaladda sii xumeeyay abaar ba’an oo dalkaasi soo wajahday muddo tobaneeyo sano ah.